राष्ट्रिय सभामा सांसदको प्रश्न - 'डेंगुले कति मान्छे मरेपछि महामारीको रुप लिन्छ ?'
राष्ट्रिय सभामा सांसदको प्रश्न – ‘डेंगुले कति मान्छे मरेपछि महामारीको रुप लिन्छ ?’
काठमाडौं २५ भदौ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले लामखट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेङ्गु रोगले देशभर आतङ्क सिर्जना गरेको हुँदा राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद अधिकारीले स्वास्थ्यमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । उनले समयमै पहिचान गर्दा यो रोगबाट मर्नु पर्दैन भन्ने जनचेतना फैलाउन सचेत गराउन सरकारसँग माग गरे ।
सांसद अधिकारीले डेङ्गु फैलने क्रमलाई राष्ट्रिय सङ्कटका रुपमा लिनुपर्ने भन्दै, “५६ जिल्लामा फैलिएको छ, यो रोग राष्ट्रिय महामारी हो कि होइन ? यसलाई स्वास्थ्यको सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कति मान्छे मरेपछि यसले महामारीको रुप लिन्छ ।”
डेङ्गु रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको कामका सम्बन्धमा स्वास्थ्यमन्त्रीको जवाफ अति जरुरी भएको बताउदै उनले भने, “सरकार कहाँ छ के गर्दैछ ? यसको महामारी रोक्न सरकारले के गर्दैछ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय, सेना र प्रहरीको भूमिका के हो ?” उनले डेङ्गु रोग परीक्षणको नाममा निजी अस्पतालहरुले चर्को शुल्क असुलिरहेको हुँदा परीक्षण शुल्क तोक्न सरकारसँग माग गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की कोमल वलीले तीन तहका सरकारले आपसमा सहकार्य गरी डेङ्गु रोगको नियन्त्रणमा तत्परता देखाउनु पर्ने भन्दै स्थिति भयावह भएको बताइन् । जनचेतना फैलाउन र भविष्यमा हुन नदिन पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले भर्खरै भएको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार अत्यन्त अपरिपक्वरुपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउँदै आगामी दिनमा स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रामप्रीत पासवानले तराई मधेशका सुकुम्वासीको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद वीना पोखरेलले दशैँमा शान्तिसुरक्षालगायतका विषयलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले टिकटमा हुने अनियमितता रोक्न, उचित टिकट दर कायम गर्न, सहुलियत पसलको व्यवस्था गर्न, उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।